Famonoana ireo vazaha Frantsay roa tany Sainte Marie : 7 ireo voasambotra, Fantsay lahy ny iray | NewsMada
Famonoana ireo vazaha Frantsay roa tany Sainte Marie : 7 ireo voasambotra, Fantsay lahy ny iray
Par Taratra sur 24/08/2016
Efatra, dimy… Tafakatra fito, hatramin’ny omaly, ireo olona nosamborin’ny mpanao famotorana mikasika ilay vonoan’olona nahafaty ireo teratany frantsay roa, Magalie Céline Hélène Chaigneu sy Romain Rousi Henri, ny alahady lasa teo. Teratany frantsay lahy iray, voalaza fa efa nipetraka ela tany Sainte Marie ary sakaizan’I Magalie Céline, ity fahafito voasambotra.
Mihazakazaka ny toe-draharaha momba ny famonoana ireo teratany frantsay roa tany Sainte Marie, hatramin’ny alahady teo. Olona fito amin’izao fotoana izao no voasambotra, ka anisan’izany ny teratany frantsay iray, izay voalaza fa anisan’ny sakaizan’ilay vazaha vavy teo aloha, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny mpampanoa lalàna ao Toamasina, Thierry Rajaona Lauret, tamin’ny gazety Le figaro. Ny dimy tamin’ireo efa voasambotra ny alahady teo ihany, taorian’ny nahitana ny fatin’ireto mpifankatia frantsay ireto. Olona nahiahiana izy ireo, izay niara-nivoaka alina tamin’ireo vazaha ireo ny alin’ny asabotsy. Tany amin’ilay teratany frantsay sakaizan’ilay tovovavy taloha ihany ka io no iantefan’ny eritreritry ny mpanao famotorana, ka antony nisamborana azy. Mandeha ny fandihadiana ireo olona rehetra ireo amin’izao fotoana izao.
Ankoatra ireo mpanao fanadihadiana, zandary sy polisy ary ny mpampanoa lalàna ao Toamasina efa nandeha tany Sainte Marie, fantatra izao fa ho avy any tsy ho ela ny mpampanoa lalàna frantsay miisa roa. Araka ny L’info.Re, nifampiresaka mivantana an-telefaonina ihany koa ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Attallah Béatrice sy ny minisitra frantsay, Jean-Marc Ayrault, momba ity raharaha ity. Maniry ry zareo Frantsay mba hojerena akaiky ity raharaha ity ary mba ho hita faran’izay haingana ny tompon’antoka sy ny anton’ny famonoana. Azo heverina fa mifanandrify amin’izany no mety mampihazakazaka ny toe-draharaha tahaka izao, nahasamborana ireo olona fito ireo avy hatrany.
Mampitandrina ny terataniny ry zareo Frantsay
Manoloana ity tranga tany Sainte Marie ity, mampitandrina ireo teratany frantsay eto amintsika ny fitondrana frantsay. Lasibatra matetika izy ireo amin’ny asan-jiolahy sy ny asa famonoana eto amintsika eto, ka izay no anton’izao fampitandremana izao. Miantso ny governemanta malagasy rahateo izy ireo mba hiantoka ny fiarovana ireo Frantsay monina sy miasa eto amintsika. Mazava ho azy, mety hihena ireo teratany frantsay ho avy aty amintsika taorian’ity tranga ity. Sakana ho an’ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fampiasam-bola ny tranga toy izao. Andrasana ny fivoaran’ny toe-draharaha.